BitTokens စျေး - အွန်လိုင်း BXT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitTokens (BXT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitTokens (BXT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitTokens ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $316 596.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitTokens တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitTokens များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitTokensBXT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0779BitTokensBXT သို့ ယူရိုEUR€0.066BitTokensBXT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0597BitTokensBXT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0709BitTokensBXT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.692BitTokensBXT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.491BitTokensBXT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.72BitTokensBXT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.29BitTokensBXT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.103BitTokensBXT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.109BitTokensBXT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.73BitTokensBXT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.604BitTokensBXT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.418BitTokensBXT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.83BitTokensBXT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.13.16BitTokensBXT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.107BitTokensBXT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.119BitTokensBXT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.42BitTokensBXT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.541BitTokensBXT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥8.33BitTokensBXT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩92.41BitTokensBXT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦30.2BitTokensBXT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.69BitTokensBXT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.14
BitTokensBXT သို့ BitcoinBTC0.000007 BitTokensBXT သို့ EthereumETH0.000203 BitTokensBXT သို့ LitecoinLTC0.00143 BitTokensBXT သို့ DigitalCashDASH0.000859 BitTokensBXT သို့ MoneroXMR0.000875 BitTokensBXT သို့ NxtNXT6.08 BitTokensBXT သို့ Ethereum ClassicETC0.0115 BitTokensBXT သို့ DogecoinDOGE22.5 BitTokensBXT သို့ ZCashZEC0.000946 BitTokensBXT သို့ BitsharesBTS2.4 BitTokensBXT သို့ DigiByteDGB2.49 BitTokensBXT သို့ RippleXRP0.277 BitTokensBXT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00269 BitTokensBXT သို့ PeerCoinPPC0.259 BitTokensBXT သို့ CraigsCoinCRAIG35.52 BitTokensBXT သို့ BitstakeXBS3.32 BitTokensBXT သို့ PayCoinXPY1.36 BitTokensBXT သို့ ProsperCoinPRC9.78 BitTokensBXT သို့ YbCoinYBC0.00004 BitTokensBXT သို့ DarkKushDANK25.02 BitTokensBXT သို့ GiveCoinGIVE168.84 BitTokensBXT သို့ KoboCoinKOBO17.76 BitTokensBXT သို့ DarkTokenDT0.0718 BitTokensBXT သို့ CETUS CoinCETI225.15
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 05:10:02 +0000.